Nhau - Maitiro Ekushambadzira Nzira Yako Kunze Kwebhizinesi
Makambani mazhinji ari kushambadzira chaiko nzira yavo yekubuda mubhizinesi ine yakaderera mhando masaini. Aya makambani anoita kunge asiri kunyatsoona kukanganisa kwakanyanya kunogona kuve nemhando iyi yemasaini.
Ongororo ichangoburwa yakaitwa naDr.James J. Kellaris weLindner College yeBhizinesi kuYunivhesiti yeCincinnati inobatsira kujekesa kukosha kwakanyanya kwemasaini epamusoro. Zvakawanikwa pakutsvaga zvinoratidza kuti vatengi vanowanzo kupa bhizinesi mhando kubva pamasaini mhando. Uye iwo iwo maonero ehunhu anowanzo kutungamira kune dzimwe sarudzo dzevatengi.
Semuenzaniso, uhwu hunhu hunoteedzerwa kazhinji hunotungamira kune mutengi sarudzo yekupinda kana kusapinda bhizinesi kekutanga. Kuvaka mutsva mutengi tsoka tsoka nguva dzose yakakosha metric kune inobatsira pachitoro chitoro. Ichi chihombe chikamu chenyika kudzidza chinoratidza kuti yakakwira mhando masaini anogona kubatsira nechinangwa icho.
Mune ino mamiriro, "chiratidzo chemasaini" hazvireve chete kuti chimiro chemuviri chebhizinesi signage. Izvo zvinogona zvakare kureva iyo yakazara signage dhizaini uye utility. Semuenzaniso, chidzidzo chacho chinotaura kuti kuverengeka ndiyo imwe nzvimbo yevatengi chiratidzo chehunhu kuona, uye 81.5% yevanhu vanotaura kugumbuka uye kugumbuka kana masaini mameseji ari mashoma kwazvo kuti averenge.
Uye zvakare, mhando inogona zvakare kureva kukodzera kweiyo yakazara signage dhizaini yerudzi irwo rwebhizinesi. 85.7% yevakabvunzurudzwa pakudzidza vakati "zvikwangwani zvinogona kuratidza hunhu kana hunhu hwebhizinesi."
Kuti utarise divi rakapesana nedata rechidzidzo ichi, yakaderera mhando masaini anogona kutariswa senzira yekushambadzira kambani kunze kwebhizinesi. Chidzidzo ichi chinoti 35.8% yevatengi vakakweverwa muchitoro chisingazivikanwe zvichibva pahunhu hwezviratidzo zvayo. Kana bhizinesi rakarasikirwa nehafu yeiyo ingango nyowani mutengi tsoka tsoka nekuda kwekukosha kwemasaini, izvo zvinoshandura zvakadii mune yakarasika yekutengesa mari? Kubva pamaonero iwayo, yakaderera mhando masaini anogona kutariswa seanokurumidza nzira yekubhuroka.
Ndiani akambofunga kuti bhizinesi raigona kushambadza chairo nzira yekubuda mubhizinesi? Pfungwa yacho yese inoita senge isingabvumike, asi izvozvi indasitiri yekutsvagisa inoratidza kuti zvinogona kuitika nemasaini emhando yepasi.
Zviratidzo Zvakanaka sezasi pazasi:
Post nguva: Aug-11-2020